Kuhle Umkhiqizi we-85-265V 80Ra Led Motion Sensor Tube Light ne-Factory | U-Anan
I-85-265V 80Ra Led Motion Sensor Tube Light
1. Ezindaweni ezibandayo zasebusika njengezindawo ezisenyakatho noma zangaphandle zokusebenzisa, amalambu asetshenzisiwe kufanele abe sezingeni eliphakeme lokubekwa uphawu, futhi akuvunyelwe neze ukuqaqa isembozo esingaphezulu samalambu asetshenzisiwe.
2. Ukuphambuka kwamandla kohlelo lwangempela lwezibani ezisekelayo kungaphakathi kwe- ± 10% yebanga elivumelekile.
Ithempelesha yombala (CCT):
Kupholile / Kufudumele / Kumhlophe Okumsulwa
Ukushisa okusebenzayo (℃):
Isikhathi sokusebenza sokusebenza (ihora):
Lamp Umzimba Material:
I-Aluminium / Ingilazi / iNano
I-BV, CCC, ce, RoHS
tube kwaholela inzwa
Umthombo Wokukhanya Kwe-LED:
Ngaphambi kokufaka i-oda, sicela uqinisekise yonke imingcele yomkhiqizo, bese uxoxa ngomklamo we-logo nokuklanywa kwempahla kusengaphambili ngenkonzo eyenziwe ngezifiso.
Ukusebenza kahle kokukhanya okuphezulu: kwenziwa nge-patent ezimele yomkhiqizo owaziwayo emhlabeni jikelele, ngokusebenza okuphezulu kakhulu kwe-115lm / w, okungu-70% wokonga amandla kunesibani sendabuko se-fluorescent.
1. I-tech infrared infuction tech, ekhanyisa ngokuya nge-infrared spectrum ekhishwa ngumzimba;
2. Ukuzwela okuphezulu nokwethembeka;
3. Inzwa ezenzekelayo, ukukhanyisa lapho kufika abantu nemoto, kuphume uma sekuphumile.
Isibonelo No. Usayizi (mm) Izinto Amandla Ama-Diode e-LED Ukusebenza kahle kweLumen PF RA Amandla
I-AA-PWG0801-05 300 Ingilazi 5 Ama-24 ama-PC 2835 I-100lm / w 0.9 80 85-265v
I-AA-PWG0802-09 600 Ingilazi 9 Ama-54 ama-PC 2835 I-100lm / w 0.9 80 85-265v
I-AA-PWG0803-14 900 Ingilazi 14 Ama-72 ama-PC 2835 I-100lm / w 0.9 80 85-265v
I-AA-PWG0804-18 1200 Ingilazi 18 98 ama-PC 2835 I-100lm / w 0.9 80 85-265v
I-AA-PWG0801-24 1500 Ingilazi 24 Ama-120 ama-PC 2835 I-100lm / w 0.9 80 85-265v
I-AA-PWG0802-36 2400 Ingilazi 36 Ama-192 ama-PC 2835 I-100lm / w 0.9 80 85-265v
I-AA-PWA0803-05 300 I-PC + AL 5 Ama-24 ama-PC 2835 I-100lm / w 0.9 80 85-265v
I-AA-PWA0804-09 600 I-PC + AL 9 Ama-54 ama-PC 2835 I-100lm / w 0.9 80 85-265v
I-AA-PWA0801-14 900 I-PC + AL 14 Ama-72 ama-PC 2835 I-100lm / w 0.9 80 85-265v
I-AA-PWA0802-18 1200 I-PC + AL 18 98 ama-PC 2835 I-100lm / w 0.9 80 85-265v
I-AA-PWA0803-24 1500 I-PC + AL 24 Ama-120 ama-PC 2835 I-100lm / w 0.9 80 85-265v
I-AA-PWA0804-36 2400 I-PC + AL 36 Ama-192 ama-PC 2835 I-100lm / w 0.9 80 85-265v
I-AA-PWN0803-05 300 UNano 5 Ama-24 ama-PC 2835 I-100lm / w 0.9 80 85-265v
I-AA-PWN0804-09 600 UNano 9 Ama-54 ama-PC 2835 I-100lm / w 0.9 80 85-265v
I-AA-PWN0801-14 900 UNano 14 Ama-72 ama-PC 2835 I-100lm / w 0.9 80 85-265v
I-AA-PWN0802-18 1200 UNano 18 98 ama-PC 2835 I-100lm / w 0.9 80 85-265v
I-AA-PWN0803-24 1500 UNano 24 Ama-120 ama-PC 2835 I-100lm / w 0.9 80 85-265v
I-AA-PWN0804-36 2400 UNano 36 Ama-192 ama-PC 2835 I-100lm / w 0.9 80 85-265v
Q1: Unganginika ikhathalogi yakho?
A: Yebo, singakwazi. Kepha ngicela ungitshele ngomusa ukuthi hlobo luni lwento oyithandayo bese unginika eminye imininingwane. Kuzosisiza ukukunikeza inani elihle.
Q2: Ungakwazi yini ukusenzela umklamo?
A: Yebo, sineqembu lochwepheshe elinolwazi oluningi ekuklanyeni nasekukhiqizeni. Vele usitshele imibono yakho futhi sizokusiza ukufeza imibono yakho ezintweni ezinhle. Akunandaba uma ungenaye umuntu ozoqedela amafayela. Sithumele izithombe ezinokucaca okuphezulu, wena Ilogo kanye nemibhalo bese usitshela ukuthi ungathanda ukuzihlela kanjani. Sizokuthumelela amafayela aqediwe ukuqinisekisa.
Q3: Ngingasithola kanjani isampula sokuhlola ikhwalithi yakho?
A: Ngemuva kwentengo, ungadinga amasampula wokuhlola ikhwalithi yethu. Sinikezela ngezibonelo zamahhala ngenhloso yakho yokuhlola, udinga nje ukukhokha izindleko zokuthumela.
Q4: Unaluphi uhlobo lwesitifiketi?
A: Sine-CE RoHS, CCC, ISO9001.
I-Q5: Ingabe ungathumela okuthunyelwayo?
A: Yebo, singathumela imikhiqizo ekhelini elidingekayo ngqo. Sinikeza ilebula yamahhala yokuthunyelwa kwe-FBA.
Langaphambilini Intengo eshibhile T8 15W Black Light UV Lamp
Olandelayo: I-T8 G13 Glass Fluorescent Tube Ye-Aquarium
ukukhanya kweshubhu okuholelekile
kwaholela tube light rohs
Ukukhanya kwe-tube light t12
kwaholela isibani sokukhanya t8 20 watt
kwaholela isibani sokukhanya t8 50w